बाटोमा हिड्दा हिड्दैँ पैसा भेट्टाउँनु भएको छ ? हुनसक्छ यस्तो संकेत - samayapost.com
बाटोमा हिड्दा हिड्दैँ पैसा भेट्टाउँनु भएको छ ? हुनसक्छ यस्तो संकेत
समयपोष्ट २०७८ असार १ गते १३:३३
कहिले काहीँ बाटोमा हिड्दा हिड्दैँ तपाईले पैसा भेट्टाउँनुभएको होला । तपाईलाई थाहा छ यसरी बाटोमा पैसा भेटाउनुको पछि गहिरो रहस्य हुनसक्छ । ज्योतिर्विद सूरज मिश्राले यसरी बाटोमा पैसा भटिनुको के मतलव हुनसक्छ स्पष्ट वताउनु भएको छ । पैसा भेटिनु र पाउनुको केही न केही मतलव हुने गर्दछ । तपाई बाटोमा हिड्दा हिड्दैँ कही धन प्राप्ति भयो भने यसको मतलव सफलताको संकेत हुन सक्छ ।